Bit By Bit - Ukubuza imibuzo - 3.5.3 Gamification
Uphando olulinganayo lubangel 'umdla kubathathi-nxaxheba; ezinokutshintsha, kwaye kufuneka zitshintshe.
Kuze kube ngoku, ndikuxelele ngeendlela ezintsha zokucela ukuba ziququzelelwe ngudliwano-ndlebe olulawulwa yikhompyutha. Nangona kunjalo, enye i-downside ye-intanethi elawulwa ngodliwano-ndlebe kukuba akukho dliwano-ndlebe lomntu ekuncedeni ukunyusa nokugcina inxaxheba. Le ngxaki kuba uphando oluninzi luyidla ixesha kwaye luthandekayo. Ngako oko, kwikamva, abaqulunqi bezocwangcisa baya kufuneka baqulunqe malunga nabathathi-nxaxheba babo kwaye benze inkqubo yokuphendula imibuzo eyonwabileyo kunye nemidlalo. Le nkqubo ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi- gamification .
Ukubonisa ukuba yintoni inzululwazi enokuthi ibonakale ngathi, masiqwalasele i-Friendsense, uphando olwaluhlanganiswe njengomdlalo kwi-Facebook. U-Sharad Goel, u-Winter Mason kunye no-Duncan Watts (2010) bafuna ukuqikelela ukuba abantu bacinga ukuba bafana njani nabahlobo babo nokuba bangakanani abahlobo babo. Lo mbuzo malunga nesimo sengqondo esinyaniweyo kunye nesicatshulwayo sithatha ngokuthe ngqo kumandla abantu ukuqonda ngokucacileyo indawo yabo yentlalo kunye neempembelelo kwipolitiki kunye nokuguqulwa kweenguqulelo zentlalo. Ukuqonda, ukuqonda kunye nokuqonda okufana nento elula ukulinganisa. Abaphandi banokucela abantu abaninzi ngemibono yabo baze babuze abahlobo babo ngemibono yabo (oku kuvumela ukulinganiswa kwesivumelwano sengqondo sangempela), kwaye banokucela abantu abaninzi ukuba baqikelele isimo sengqondo sabangane babo (oku kuvumela ukulinganiswa kwesivumelwano sengqondo esifanelekileyo ). Ngelishwa, kunzima kakhulu ukuxoxisana nobabini ummangalelwa kunye nomhlobo wakhe. Ngoko ke, uGoel kunye noogxa bajika uphando lwabo kwi-app ye-Facebook eyayimnandi ukudlala.
Emva kokuba umntu othabatha inxaxheba avume ukuba uphando, i-app ikhethile umngane kwi-akhawunti ye-Facebook yomphenduli waza wabuza umbuzo malunga nesimo sengqondo somhlobo (umzobo 3.11). Ukudibanisa nemibuzo malunga nabahlobo abakhethiweyo, ummangalelwa waphendula imibuzo malunga naye. Emva kokuphendula umbuzo ngomhlobo, ummangalelwa waxelelwa ukuba impendulo yakhe ilungile okanye, ukuba umhlobo wakhe akaphendulanga, ummangalelwa wakwazi ukukhuthaza umngane wakhe ukuba athathe inxaxheba. Ngaloo ndlela, uphando luye lwasasazeka kwinxalenye yokuqashwa kwegciwane.
Umzobo 3.11: Isixhobo esivela kwisifundo se-Friendsense (Goel, Mason, and Watts 2010) . Abaphandi baphendukela kwiphononongo yokujonga isimo esifanelekileyo kwimeko yokuzonwabisa, njengemidlalo. Insiza icele inxaxheba mibini imibuzo ebalulekileyo kunye neminye imibuzo enomdla, njengaleyo eboniswe kulo mfanekiso. Ubuso bomhlobo buye busobala ngenjongo. Yenzelwe imvume evela kuSharad Goel.
Imibuzo yesimo iguqulelwe kwi-General Social Survey. Ngokomzekelo, "Ngaba [umhlobo wakho] unovelwano kunye namaSirayeli ngaphezu kwamaPalestina?" Kwaye "Ngaba [umhlobo wakho] uya kuhlawula irhafu ephezulu ukuba urhulumente anikezele ngononophelo lwempilo?" Ngaphezulu kwezi mibuzo ezinzulu , abaphandi badibanisa imibuzo enomdla: "Ngaba [umhlobo wakho] unokunxila iwayini ngokubheya ubhiya?" kwaye "Ngaba [umhlobo wakho] unokuba namandla okufunda iingqondo, esikhundleni sokuba aphephe amandla?" Le mibuzo ephosakeleyo yenza Inkqubo eyonwabileyo kubathathi-nxaxheba kwaye yenza ukuba kuthelekiswe okuthakazelisayo: ngaba isimo sengqondo siza kufana nemibandela engqongqo yezopolitiko kunye nemibuzo enomdla ngokuphathelele ukusela nokugqithisa?
Kukho iziphumo ezintathu eziphambili ezivela kwisifundo. Okokuqala, abahlobo babekwazi ukunika impendulo efanayo kunezinye abantu abangaziwayo, kodwa nabahlobo abasondeleyo bengavumelani malunga ne-30% yale mibuzo. Okwesibini, abaphenduli bavakalisa isivumelwano sabo kunye nabahlobo babo. Ngamanye amazwi, uninzi lweentlobo zeengcamango ezikhoyo phakathi kwabahlobo aziqapheli. Ekugqibeleni, abathathi-nxaxheba bekunokwenzeka ukuba baqaphele ukungavumelani kunye nabahlobo babo kwimicimbi enzulu yezopolitiko njengemiba enomdla ngokuphathelele ukusela nokugqithisa.
Nangona iprogram ngethuba ayisekho ukudlala, kwaba ngumzekelo omhle wendlela abaphandi abanokuyenza ngayo inzululwazi yokujonga isimo esifanelekileyo. Okuqhelekileyo ngokubanzi, kunye nokusebenza kwendalo kunye nokuyila, kunokwenzeka ukuba kuphuculwe amava omsebenzisi kubathathi-nxaxheba. Ngoko, ngokuzayo ukwenza uphando, thabatha umzuzu ukucinga malunga nento ongayenza ukuze wenze amava angcono kubathathi-nxaxheba bakho. Abanye bangenako ukuba le nyathelo ekubhekiselele ekuhlaleni ingabangela ubuhlungu bwedatha, kodwa ndicinga ukuba abachaphazelekayo abathathi-nxaxheba babeka ingozi enkulu kumgangatho wedatha.
Umsebenzi weGoel kunye noogxa nabo ubonisa umxholo wecandelo elilandelayo: ukudibanisa uphando kwimithombo yolwazi emikhulu. Kule meko, ngokudibanisa uphando lwabo nge-Facebook abaphandi ngokuzenzekelayo banokufikelela kuluhlu lwabahlobo bathathi-nxaxheba. Kwinqanaba elilandelayo, siza kuqwalasela ukudibanisa phakathi kovavanyo kunye nemithombo enkulu yedatha ngokubanzi.